Jigjiga(cakaaranews)Arbaco, 6da June, 2018. Madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar iyo waftigii uu hogaaminayay ayaa dib ugu soo laabtay xarunta DDSI ee magaalada jigjiga kadib markii ay usoo dhamaadeen shirarkii muhiimka ahaa ee ay kaga qaybgaleen xarunta dalka ee magaalada adhisababa.
Hadaba, madaxwaynaha DDSI iyo waftigii uu hogaaminayay ayaa wakhti xaadirkan kusugan xarunta DDSI ee magaalada jigjiga.
Jigjiga(cakaaranews)Talaado, 5ta June 2018. Waxaa booqasho ku yimid machadka cilmibaadhista xoolaha iyo beeraha DDSI Safiirka Switzerland u fadhiya dalkeenan itoobiya mudane Daniel iyo madaxa hay’ada GIZ marwo Elizabeth islamarkaana kulan layeeshay mas’uuliyiinta machadka. Iyagoo kadibna si wada jir ah usoo indho-indheeyay Mashaariicaha ay wada fulinayaan macahadka cilmi baadhista DDSI iyo hay’ada GIZ.
Hadaba, Maareeye Kuxigeenka Macahadka Cilmi Baadhista Xoolaha Iyo Beeraha DDSI Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Aadan oo lahadlay warbaahinta aya asheegay in masuuliyiin kasocda hay’ada GIZ ay soo booqdaeen machadka islamarkaana ay ujeedada booqashadoodu tahay inay indho indheeyaan mashaariicaha ay wada fulinayaan macahadka cilmi baadhista DDSI iyo hay’ada GIZ . Iyadoo si gaar ah ay u indho indhaynayaan mashruuca balaadhan ee kaydinta casriyaysan ee dhirta deegaanka. Kuwaas oo ah dhir ama geedo laga uruuriyay deegaanka 20 sano kahor, tiradooduna dhan tahay ilaa 6000 oo geed oo kaladuwan islamarkaana si casri ah loodiyaarinayo laguna kaydinayo softwero kala duwan.
Sidookale, agaasimayaasha iyo xirfadlayaasha macahadka cilmi baadhista DDSI ayaa iyana dhankooda kawarbixiyay waxqabadka iyo natiijooyinka mashrriicaha ay wada fulinayaan machadka iyo hay’ada GIZ. Waxayna kawarbixiyeen nidaamkan kaydinta casriga ah ee dirta la uruuriyay iyo faaiidooyinka ay yeelan doonto
Dhankakale, mas’uuliyiintan iskudhafka ah ee kasocda hay’ada GIZ ayaa si qoto dheer usoo indho indheeyay noocyada kalduwan ee dhirta kuwaas oo ay ka midka yihiin dacar-cadayda, dacar-caarayda , abaabinta iyo waliba geedaha dhirta ah ee erginta, gabawga, haadaynta, xaskulka, xiga iyo dhagwaynta kuwaaso oo dhamaantood loo isticmaalo arimo kalduwan.
Iskusoowada duuboo, masuuliyiintan ajnabiga ah ayaa si wayn ugu riyaaqay hawlaha shaqo ee macahadka cilmi baadhista DDSI iyagoo sheegay in meel fiican oo heersare ah la gaadhsiiyay shaqooyinka ay wada fulinayaan macahadka cilmi baadhista iyo hayada GIZ.
Dolo-cado(cakaaranews)Isniin, 4ta June 2018. Tababar uu soo agaasimay xafiiska beeraha iyo horumarinta khayraadka dabiiciga ah DDSI islamarkaana kuqotama kobcinta garaadka aqoomeed ee shaqaalaha Barnaamijka shabakada waxsoosarka cunada (PSNP) ee kahawlgala degmooyinka hoosyimaada gobolada liibaan iyo daawa ayaa si habsami leh uga bilawday degmada doolo-cado ee katirsan gobolkaasi liibaan.
Hadaba, tababarka ayaa waxaa shabakada wararka ee cakaaranews uga warbixiyay khabiirada tababarka fulinaya Mudane Maxamd Shugri Iyo Marwo Xamdi Muxumed oo sheegay in tababarkani yahay mid lagu kobcinayo garaadka aqoomeed ee shaqaalaha barnaamijka PSNP ee kakala shaqeeya degmooyinka kala duwan ee uu kahwlagalo mashruucu islamarkaana hoosyimaada gobolada liibaan iyo daawa. Waxayna khabiiradu intaas kudareen in tababarkan shaqaalaha lagu siinayo casharo laxidhiidha kahortaga jeex-jeexyada, warraarada iyo caraguurka. Iyo waliba sidii loola tacaali lahaa caraguurka Waxayna xuseen in sidookale shaqaaluhu tababarkan kubaranayaan nidaamyada lagu Horumarinayo dhuldaaqsimeedka iyo waliba uruurinta biyaha iyo faa’iiodooyinkooda.
Dhankakale, khabiiradan tababarka fulinayay ee katirsan xafiiska beeraha iyo horumarinta khayaraadka dabiiciga ah DDSI ayaa Tilmaamay in tababarkani uu socon doono mudo 15 cisho ah. Waxayna carabka kudhufteen in kadib marki uu tababarku u dhamaado shaqalaha ay kadhaxli doonaan cilmi iyo aqoonbadan.
Iskusoowada duuboo, tababarkan oo ay fulintiisa iyo diyaarintiisaba iskusoodubariday waaxda damaanad qaadka cuntada ee xafiiska beeraha iyo horumarinta khay-dabiiciga ah DDSI ayaa sidookale kasocda gobolada kale ee deegaanka islamarkaana loohaya shaqaalaha barnaamijka PSNP
Jigjiga(cakaaranews)Isniin, 4ta, June 2018. Kadib markii uu si nabadgalyo ah uga soo dhamaaday deegaanka imataxaakii heer qaran ee fasalka 10aad ayaa Waxaa maantana si rasmi ah dhamaan dalka iyo deegaankaba uga bilawday imataxaanka heerqaran ee fasalka 12aad iyadoo xarunta deegaanka eemagaalada jigjiga ay kormeer indhoindhoyn ah kusoomareen habsami usocodka imtaxaanka mas’uuliyiin uu horkacyo wasiirka xafiiska waxbarashada DDSI oo uu waheliyo maayorka MMJ iyo agaasimayaasha xafiiska waxbarashada DDSI.
Hadaba, Wasiirka Xafiiska Waxbarashada DDSI Mudane Ibraahim Aadan Mahad oo warbaahinta lahadlay ayaa sheegay in imtaxaanka heerqaran ee fasalka 12aad uu si rasmi ah uga bilawaday dhamaan dugsiyada u diyaargarwaga jaamacadaha deegaanka (preparatory sch). Wuxuuna xusay in sanad dugsiyeedkan 2010 T.i ay imtaxaanka ufadhiisteen arday tiradoodu kor udhafayaso 10,000 oo arday oo ah fasalka 12aad kuwaas oo imtaxaanka kukala qaadanaya 98 dugsi oo deegaanka ah. Wuxuuna tilmaamay in imtaxaankan ay kaqaybqaadanayaan 281 ilaaliyaal ah iyo 63 kormeerayaal ah. Wasiirka oo hadal kiisa sii wata ayaa carabka kudhuftay in natiijooyin wanaagsan uu urajaynayo dhamaan ardayda qaadanaysa imtaxaanka heer qaran.
Dhankakale, Wasiirka ayaa sidookale soo kormeeray habsami usocodka imtaxaanka ee senetenrada dhagaxle iyo bombaas ee degmada gursum.
Iskusoowada duuboo, imataxaanka udiyaargarawga jaamacadaha oo si habasamileh uga bilawday dhamaan deegaanka ayaa socon doona mudo 4 maalmood ah kaas oo laga filayo inuu kuu soodhamaado jawi wanaagsan oo nabad ah.